यस जोडीले गरे पानि मुनि विवाह ! यस्तो रह्यो विवाह समारोह ! (फोटो सहित) – cafeguff
मानिसहरु विवाह फरक-फरक ठाउमा गर्न मन पराइउने हुन्छन्। कसैले मन्दिरमा तथा धार्मिक स्थलमा गर्ने गर्छन् भने कोहिले अदालतमा गर्ने गर्छन्।
कोहिले चाही प्रचलनमा रहेको भन्दा फरक तरिकाबाट विवाह गर्ने गर्छन्। एक अचम्म लाग्ने जोडीले पानि मुनि विवाह गरेको समाचार बाहिरिएको छ। भारतको महाराष्ट्रमा रहने एक युवकले आफ्नो प्रेमीकासँग पनि मुनि विवाह हरेक हुन्। आफ्नो फरक याद्कार विवाह रहोस् भन्ने हिसावले उनीहरुले पनि मुनि विवाह गरेको समाचार सम्प्रेषण भएको छ।
निखिल पवार नाम गरेका युवकले स्लोवाकियाका यूनिका पोगरानसँग पनि मुनि विवाह हरेक हुन्। तिरुवनंतपुरममा कोवालम भन्ने ठाउँ नजिक रहेको समुन्द्र भित्र आफ्नो विवाह समपन्न गरेका उनीहरुले तस्विर सार्वजनिक गरेका हुन्। निखिल एक डाइविंग प्रशिक्षक रहेका छन्। जुलाई २०१६मा निखिलले प्रेमिका यूनिकालाई पानीमानै प्रेम प्रस्ताव गरेका थिए।
निखिलका अनुसार डाइविंग उनको पहिलो रोजाइको काम रहेको छ भने उनले यूनिकासँग डाइविंग प्रशिक्षण दिने क्रममा भेट भएको थियो। आफुलाई पानि देखि धेरै प्रेम भएको कारण आफुले विवाह पनि मूनि गरेको उनको भनाइ रहेको छ। उनको विवाहको जिम्मा इम्प्लायर बण्ड सफारीले लिएको थियो। त्यस कम्पनीका म्यानेजरका अनुसार उक्त विवाहको लागि फरक किसिमको तयारी गरिएको थियो भने त्यस विवाह समोरह पूर्ण रुपले प्राकृतिक समेत रहेको उनको बुजाइ रहेको छ।